Ka leexashada, Khibradda iyo Qiimaha - Jawaabta maqaalka Prof. Yoram Yuval, "Ma leexleexan", Shabbat P.P.
Xagga leexashada, Khibradda iyo Qiimaha - Jawaabta maqaalka Prof. Yoram Yuval, "Ma leexdaan", Shabbat P. P. Akef - Safka sii socda (Column 26)
8 faallooyin	/ 19 Ceelul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 19 / 09 / 2016
In tiir kii hore Waxaan ka faallooday maqaalka Prof. Yoram Yuval ee kabka Shabbat ee Makor Rishon P. ee sanadkan (XNUMX). Waa inaad sidoo kale aragtid doodaha ka soo baxay dib u celinta qoraalkayga.
Jawaabteyda Prof. Yuval's waxaa lagu daabacay nuqul la soo gaabiyey ee Shabbat supplement P. Ra (oo ay la socdaan Faallooyin badan Waxa xiiso leh in ay xaqiiqdii dhammaantood mudan yihiin in la akhriyo ). Waa kuwan ereyadayda halkaas ku daabacan:
Dhanka leexashada, khibradda iyo qiyamka
(Kajawaabista maqaalka Prof. Yoram Yuval, "Ma leexdaan", Shabbat supplement P. Akev)
Maqaalka Prof. Yuval Luca wuxuu leeyahay iskudhaf culus oo qiyam ah iyo xaqiiqooyin. Waxa macno leh in la tilmaamo in kala-soociddaasi ay ahayd shumac cagihii awoowgii hore ee maqaalka lagu sheegay, waana wax laga xumaado in uu iska indha tiray.
Hadaladiisu waxay ku taagan yihiin saddex tiir: 1. Tusaalaha xidhiidh weyn iyo xirfadle. 2. Qeexitaanka maskaxda ee leexashada galmada (awood la'aanta in la jeclaado qof dhan). Sheegashooyinka sayniska: Khaniisnimadu maaha natiijada doorashada ee waa asal dabiici ah, aad bay u adagtahay in la beddelo waana khatar in la isku dayo. Hadda ka hor halkan waxa uu si kooban u leeyahay: 3. Qaabka uu soo jeediyay Yuval waa khalad (eeg maqaallada duhurkii) sidoo kalena aan khusayn doodda halkan. 1. Qeexitaanka dhimirku sidoo kale kuma xidhna dood. 2. Su'aalahan xirfadlayaasha ah maaha kuwo khuseya dooda. Hadda waan faahfaahin doonaa.
Mar aan fadhiyey kollel ku yaal Bnei Brak arday baa ii soo dhawaaday oo waydiiyay in quraaradu ay dareere tahay ama ay adag tahay. Waxaan u sheegay in marka la eego sharciyada Shabbat galaas uu yahay mid adag, inkastoo physicists u muuqdaan in ay qeexaan sida dareere ah baahidooda xirfadeed. Maahmaahna, haddii cilmi-nafsigu uu ku qeexo qallooca galmada in ay tahay karti la'aanta in la jeclaado qof dhan - ceebtooda. Laakiin waa maxay sababta halacha ama akhlaaqdu ay u qaataan qeexida xirfadda oo ay ku dabaqaan heerka caadiga ah sidoo kale? Waxaa intaa dheer, qeexitaanno ma aha wax raadin ah, markaa xirfadlaha wax faa'iido ah uma laha kuwa caadiga ah ee la xidhiidha iyaga. Dhakhaatiirta cilminafsiyeedka waa inay qeexaan fikradahooda baahida xirfadeed, laakiin taasi shaqo kuma lahan su'aasha caadiga ah. Michel Foucault waxa uu qoray in ogaanshaha cudurka dhimirku uu ka buuxo malo-qaadyo qiimo leh. In kasta oo uu ka mid ahaa hormoodka casriga casriga ah ee indhahayga, wuu ku saxnaa. Hagaag, laba jeer maalintii xitaa saacadda taagan ayaa tilmaamaysa wakhtiga saxda ah.
Dhakhaatiirta cilminafsiyeedka ayaa ugu badnaan go'aamin kara halka ay ka timid khaniisnimada. Ma leedahay hidde-side, deegaan, ama asal kale. Wuxuu go'aamin karaa haddii lagu daweyn karo iyo siyaalo noocee ah, iyo cawaaqibka daawaynta kasta waxay tahay. Kuwani waa dhammaan go'aannada xirfadeed, oo loo maleynayo in aqoonta sayniska ay jirto (iyo hubaal maahan mid dhamaystiran kiiskan, taas oo fikradeyda aan lagu adkeynin erayada Yuval), khabiirku wuxuu ku siin karaa jawaabo. Laakiin su'aasha ah in tani ay tahay leexasho iyo sida ay tahay in loola dhaqmo waa arrin qeexid caadi ah oo aan ahayn go'aaminta xirfadeed (eeg maqaallada sare).
Laba faallooyin oo kale:
A. Khabiir yar oo cilmi-nafsiga ah, waxaan ka shakisanahay sharraxaadda uu soo jeediyay Yuval ee isbeddelka dabeecadda cilmi-nafsiga ee ku aaddan khaniisnimada. Fikradayda, tani inta badan waa isbeddelka qiyamka ee maaha mid cilmi-baaris ah. Qayb muhiim ah oo ka mid ah bulshada maanta waxay aaminsan tahay in ifafaale uusan ahayn mid akhlaaq ahaan xun (xataa kan yar ayaa ku raacsan arrintan) sidaas darteed uma arko leexasho. Cilmi-nafsiga halkan waxaa hoos u dhigaya qiyamka bulsheed, oo ma aha si kale. Ka fikir kleptomania. Aynu ka soo qaadno ujeedada dooda in ay asal ahaan ka soo jeedo hidde-sidaha oo aan la beddeli karin (la beddeli karin). Tani miyay la macno tahay in kleptomania aanay ahayn leexasho? Waa mamnuuc iyo waxyeello in la xado, markaa waa macquul in kleptomaniac lagu qeexo qallooc. Tani waa inkastoo xaqiiqda ah in xitaa ay jirto u janjeera in la xado macnaheedu maaha in qofku dhab ahaantii wax xado (sida Yuval u sharxay khaniisnimada), xitaa halkaas lama daweyn karo oo wuxuu leeyahay ilo hidde ama organic (sida aan u qaatay ujeedada ujeedada dood). Farqiga u dhexeeya kleptomania iyo khaniisnimada ayaa ah in inta badan dhakhaatiirta cilmi nafsiga ee maanta ay aaminsan yihiin in ay bannaan tahay oo aan dhib lahayn in la isu galmoodo, halka tuuganimadu ay mamnuuc tahay oo ay waxyeello ku tahay indhahooda. Waxaa noo cad in kuwani ay yihiin qiyam iyo xaqiiqo.
B. Yuval wuxuu qoray in "nin kasta oo diin ah oo wax bartay" uu ogyahay in qaybta daryeelka degdegga ah ay ku jiifsan karto qof gebi ahaanba dhintay oo wadnuhu garaacayo. Waxaan u maleynayaa inaan ahay qof wax bartay oo qurux badan (iyo sidoo kale diin qurxoon), runtii taas ma garanayo. Weliba isaga qudhiisu ma yaqaan. Wax shaqo ah kuma laha waxbarashada (in kasta oo diinta laga yaabo inay haa tahay), gorayada sababtoo ah qeexida dhimashada iyo nolosha waa mid caadi ah oo maaha mid caafimaad. Dhaqtarku wuxuu go'aamin karaa, haddii ay dhan tahay, waxa hawlaha ka jira xaaladdan oo kale, iyo waa maxay fursada ah in uu uga soo laabto nolol caadi ah. Laakiin ma go'aamin karo in qofkaas oo kale uu nool yahay ama dhintay, oo hubaal ma aha inuu ku deeqi karo xubnaha (taasoo fikradeyda shakhsi ahaaneed ay tahay mid bannaan oo xitaa ku waajib ah isaga xitaa haddii loo arko inuu yahay qof nool. Fiiri maqaallada berrinka Kt). Dhammaan kuwan waa qiimo ee maaha su'aalo xaqiiqo ah. Dhakhaatiir kala duwan oo diidaya inay aqbalaan tani waa calaamad kale oo muujinaysa in isku dhafka qiyamka iyo xaqiiqooyinka aysan u muuqan oo kaliya dadka caadiga ah.
Prof. Yuval ayaa arrintan kaga jawaabay mareegta oo jawaab guud nagu soo kordhisay dhammaanteen. Jawaab gaar ah oo ku saabsan hadalkayga (iyo sidoo kale Dr. Azgad Gould) ayaa la soo qaaday Mareegtiisa Waana kan afkiisa:
Sharafta Rabbi Dr. Michael Avraham
Machadka Sare ee Tawreed
Mahadsanid, Rabbi salaam iyo Bracha,
Marka hore, ogow kuwa hoosta ku saxeexan inay si weyn kuugu mahadcelinayaan adiga iyo shaqadaada. Anigu ma joogo adduunka Tawreed ilaa xad ii saamaxaya inaan qaddariyo shaqadaada Tawreed iyo hallakii, laakiin neurobiology iyo falsafada yar ee aan fahmay ayaa igu filan inaan si weyn ugu riyaaqo buuggaaga "Sayniska Xoriyadda", oo aan filayo inuu yahay shaqada asalka ah iyo quruxda quruxda badan, iyo wax ku biirinta weyn ee goobta.
Marka la barbar dhigo raaxaysiga aan u hayo buuggaaga, waxa aad uga cad jawaabtaada aan ku qanacsanayn ee maqaallada "ma leexdaan" Taasi waa sababta aan ugu faraxsanahay qaar ka mid ah hagaajinta aan ku sameeyay naftayda halkan, si aan isugu dayo inaan kaaga dhaadhiciyo xaqnimada hadalkayga, haddii aan lagu qancin, ka dibna ugu yaraan bilow inaad dhisto buundada u dhaxaysa buurtaada iyo buurtayda. Aan ku bilowno waxyaabaha aan kugu raacsanahay:
Waxaan kugu raacsanahay laba jeer (iyo laba jeer maalintii) wax ku saabsan Michelle Foucault. Labada marka la eego postmodernism, taas oo aan sidoo kale aaminsanahay in ay tahay qoraal madhan, iyo marka la eego go'aankeeda ku saabsan ogaanshaha cudurka dhimirka, taas oo, nasiib daro, uu aad u saxsan yahay. Laakiin waxaan aaminsanahay, mana hubo in halkan aad igu raacsan tahay, in aysan suurtagal ahayn haddii kale: waxay ku xiran tahay ogaanshaha cudurka dhimirka, dabeecadeeda, in aysan awoodi doonin in ay ka baxdo fikradaha qiimaha, ugu yaraan maaha. mustaqbalka la arki karo. Oo sidaas daraaddeed waxa uu faylasuufku awoodo - si loo kala saaro kala soocida fiiqan ee u dhexeeya qiyamka iyo xaqiiqooyinka, dhakhtarka dhimirka ma awoodo. Si gaar ahna uma khiyaami karo naftiisa iyo shacabkaba in ay jiraan -ama ay jiri karaan - kala fogaansho buuxda oo ka jirta goobtiisa. Dib ayaan ugu soo noqon doonaa.
Waxa kale oo aan kugu raacsanahay falanqayntaada fiiqan su'aasha ah heerka xalaasha ah ee ninka jiifa daryeelka degdega ah marka ay maskaxdiisu shaqada ka tagto oo uu wadnuhu garaaco mar kale, qalbigiisuna garaaco, xitaa waxaan wax cusub ka bartay waxyaalaha aad ku qortay cutubka. ciwaanada ku saabsan mawduuca jawaabtaada. Intaa waxaa dheer: Waxaan ku faraxsanahay in gabagabadaada kama dambaysta ah - inay waajib tahay inaad ku deeqdo xubnaha ninkan - ay la mid tahay aniga. Waxaan rajeynayaa inaad sii wadi doonto inaad ka faa'iidaysato maqaamkiinna iyo saamaynta aad ku leedahay Bini Tawreed si aad u beddesho jaahilnimada - iyo xitaa bidcada - dabeecadda qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha diinta Yuhuudda ee ultra-Orthodox iyo qaran-diimeed ee arrinta.
Laakiin waxa aad samayn karto oo ku saabsan farqiga u dhexeeya "nool" iyo " dhintay", ma waxaad samayn kartaa, in my opinion, samayn kartaa oo ku saabsan farqiga u dhexeeya "qalloocan" iyo "aan qalloocin." Waxaan sharxi doonaa erayadayda: Marka hore, lid ku ah waxaad qorto, dhakhtarka iyo in ka badan sida loo go'aamiyo in qofku nool yahay ama dhintay. Waan garanayaa gacanta koowaad. Markii aan ka shaqeeyay qaybta bukaan-jiifka oo ah dhakhtar takhasus leh, qayb murugo leh oo shaqadayda ka mid ah waxay ahayd inaan ogaado, iftiinka ugu horreeya, dhimashada bukaannada dhintay habeenkii. Waxa aan weli xasuustaa, ilaa maanta, wejiyo badan oo aan go’o ku huwiyey, si aan ugu diyaar garoobo imaatinka shaqaalaha guriga, ee u yimi si uu u geeyo bilawgii safarkoodii ugu dambeeyey.
Haddana waxaan garwaaqsanahay in aad ku saxan tahay marka aad tiraahdo go'aanka xalaasha ah ee ah cidda "nool" iyo ka "dhintay" waxay ka duwanaan kartaa go'aaminta caafimaadka, oo aan ka leexaneynin iyada oo ay jirto. Laakin gunaanadka daahsoon ee jawaabtaada, in qeexida maskaxda ee leexashada iyo qeexida diinta (iyo hubaal qeexida bulsheed-diineed) ee leexashadu aanay sidoo kale xidhiidh la lahayn, fikradayda kama turjumayso xaqiiqada.
Aynu soo qaadano kleptomania, oo aad u soo qaadatay sidii kiis tijaabo ah. Kleptomania ma aha leexasho. Waa cillad maskaxeed. Erayga weecasho waxa lagu hayaa cilmu-nafsiga, sida luqadda dariiqa, si aan caadi ahayn, ma aha in la yidhaahdo wax nacayb ah, dabeecad ku jirta macnaha galmo. Waxaan rajeynayaa inaadan isku dayin inaad isticmaasho xisaabta, iyo dhexdhexaadnimada qiimaha, qeexida ka leexashada caadiga ah (aka weecsanaanta caadiga ah), si loo sharciyeeyo gurguurta dabeecadda qiimaha xun ee Yuhuudda ultra-Orthodox ee hay'ad u leh khaniisnimada.
Cilmi-nafsiga cilmi-nafsiga wuxuu ka shaqeeyaa "dabeecada" oo kaliya laakiin wuxuu la shaqeeyaa ifafaale shakhsi ahaaneed; Sidaad u qortay, waana ku faraxsanahay inaad halkan igu raacsan tahay, kleptomaniac maaha inuu dhab ahaantii wax xado si uu u noqdo kleptomaniac, khaniiskuna maaha inuu been u sheego lab si uu u noqdo khaniis. Laakiin halkan waxay ku dhammaatay isu ekaanshaha masaalka iyo masaalka. Kleptomaniac-ku wuxuu waxyeeleeyaa oo waxyeelo u geystaa dadka kale dabeecaddiisa, sidaas darteedna dabeecaddiisu waa khalad (ma leexin), bulshadana waa loo oggol yahay inay iska difaacdo. Waxaa intaa dheer: haddii uu xado alaabta qaaliga ah, maskaxdiisa maskaxeed ayaa laga yaabaa inaysan u soo horjeesan maxkamada, waxaana lagu xisaabtami doonaa oo kaliya marxaladda dooda xukunka. Waxaan filayaa in aniga iyo adigaba aan isku raacsannahay in khaniisiintu aysan ahayn dambiilayaal, haddii aysan been u sheegin nin - iima cadda sida ay uga duwan yihiin ragga kale ee Yuhuudda ah, oo sidoo kale wajahaya mamnuucista Tawreed ee muujinta jinsigooda.
Waxaan ku soo noqdaa arrinta ku saabsan awood la'aanta in si buuxda loo kala saaro qiyamka xaqiiqooyinka iyo xaqiiqooyinka maskaxda. Masiixi Kaatooligga ah wuxuu si kal iyo laab ah u aaminsan yahay in rootiga wadaagga ah ee uu helay oo uu cunay intii lagu jiray Masaska uu afkiisa ku noqday hilibka dhabta ah ee Masiixa. Waa fikir been abuur ah dhammaan ujeeddooyinka iyo ujeeddooyinka, waxayna ka leexanaysaa qeexida cilmi nafsiga sababtoo ah dhaqanka bulshada iyo qiimaha - boqolaal milyan oo qof ayaa aaminsan. Tani waa tusaale yar, laakiin cilmi nafsiga, marka ay timaaddo qeexida, ogaanshaha iyo daawaynta ifafaalaha shakhsi ahaaneed, waxay si qoto dheer uga dhex muuqataa mugdiga dhabta ah ee bayooloji ee dhacdooyinkan.
Waan ku faraxsanaan lahaa in aan awoodo in aan xirfadayda ku dhejiyo isla jaantusyada fiisigiska uu ku taagan yahay, laakiin ma dhici doonto inta aan noolahay, iyo si aan waligeed. Sidaad aniga iga warqabto, su’aal falsafadeed asaasi ah oo arrintaan salka ku haysa, oo aan filayo in aanay helin jawaab lagu qanci karo wakhtigan, waa su’aasha sababteeda nafsiga ah: ma hal dhinac baa mise waa laba dhinac mise kuma khusayso arrinka dhan? Awoowgay oo aad sheegtay ayaa sidaada oo kale ula macaamilay su'aasha ah sababaha nafsiga ah, oo uu xataa rumaysnaa in aanay jirin oo aanay xal u noqon karin (Jahli-ma garanayno weligiina ma ogaan doonno). Isaga oo aan iska yeelyeelin oo aan isku dayin in aan dhexda u galo halkan, dhab ahaantii waxaan taageersanahay ra'yiga ardaygiisa, Prof. Yosef Neumann, oo u maleynayay in maanta aysan xal lahayn, laakiin berrito waa suurtogal (Jahli - ma garanayno, laakiin waxaa laga yaabaa inaan ogaano maalin).
Ugu dambayntii, waxaan rabaa in aan ka soo noqdo meesha ugu sarraysa falsafada oo aan u soo noqdo dunida mugdiga ah ee khaniisiinta diinta. Waxaan maqaalkayga ku qoray erayadii saaxiibkiin Rabbi Levinstein, oo dadkaas wanaagsan ka saaray, kana murugooday. Guntii iyo gabagabadii su'aasha dhabta ah ee xiisaha ii haysa, oo aanan helin tixraac toos ah oo ku habboon jawaabtaada (oo aan rajeynayo tixraac noocaas ah), waa haddii ay jirto hab loogu oggolaado khaniisiinta diinta inay noolaadaan oo ay bilaabaan. qoysaska ku jira bulshooyinka diinta Sahyuuniyadda. Marka ay timaado dadka aan been u sheegin nin labka ah, tani waa ra'yigayga hoosaadka ah su'aal bulsheed oo ka badan midda xalaal ah. Halkan, fikradayda, adiga, aniga, iyo dhammaan akhristayaashayada waa in ay xusuustaan ​​odhaahdii saaxiibkaa, Albert Einstein: " Way fududahay inaad dillaacdo mugdi madow intii aad burburin lahayd nacayb."
Waana kan falcelinta aan ka bixinayo hadalkiisa:
Mudane Prof. Yuval, salaan.
Marka hore aniga oo sharaf ii ah inaan ku raaxaysanayo lambarradayda oo aan xitaa halkan ku muujinayo mahadnaq. Dhab ahaantii aniga iguma fududa.
Runtii, anigu kuma raacin waxa aad maqaalka ku sheegtay, inkasta oo aanan odhan karin kumaan helin. Sida caadiga ah, arrimuhu si fiican ayaa loo qoray oo si cad oo qurux badan. Hase yeeshee, sida la sheegay, xitaa ka dib "cirifka hagaajinta" (sida aad u dhigtay), kuma raacsani iyaga, oo waxaan isku dayi doonaa inaan halkan ku sharaxo sababta.
Haddii aan ku heshiinno Foucault (waxaan ula jeedaa qodobka labaad), markaas waxaan gaadhnay gabagabo caadi ah oo ugu horreeyay oo ah in cilmi-nafsiga maskaxdu uu ka buuxsamay malo-qiimo iyo in badan oo iyaga ku saleysan. Waxa kale oo ay leedahay cabbir xaqiiqo ah dabcan, laakiin gunta hoose waxay had iyo jeer ku lug leedahay qiimaha iyo su'aalaha dhaqanka.
Xaqiiqda dhabta ah ee aad ogolaatay in arrintu sidaas tahay, ma arko sida aad u sheeganayso in xidhiidhka ka dhexeeya raabi iyo dhakhtarka dhimirka uu ku xiran yahay qaabka xiriirka ka dhexeeya xirfadle iyo rabbaan. Xitaa haddii cilmi nafsigu uusan u arkin leexasho, weli waxaad ogolaatay inay tahay soo jeedin qiimo leh. Haddaba muxuu rabigu u aqbalayaa tan go'aan xirfadeed? Dabcan wuu go'aansan karaa inuu helo, laakiin waa go'aankiisa xalaal ah oo shaqo kuma laha awoodaha xirfadeed. Xagga qaabka rabbaaniga iyo xirfadlaha, waxaad horay iigu soo gudbisay jawaabtaydii ugu horreysay Maqaalkii aan u hibeeyey arrinta Duhurnimo m.
Waxa kale oo aad ku dartay in ay lama huraan tahay (in cilmi-nafsigu uu isku dari doono qiyamka iyo xaqiiqooyinka). Inkasta oo aanan ahayn xirfadle, haddana waxaan dhihi lahaa kuma raacsani arrintaas. I sax haddii aan khaldanahay, laakiin cilmi-nafsiga ayaa diiradda saari kara xaqiiqooyinka (macnaha ugu ballaaran, tusaale ahaan, oo ay ku jiraan aragtiyaha sharaxaya, sida cilmiga dabiiciga ah), iyo wax kale. Tusaale ahaan, waxay ku qanacsan tahay si joogto ah waxa asal ahaan ka soo jeeda khaniisnimada (aniga tani sidoo kale waxaa ku jira mala-awaal cilmi-nafsiyeedka duurjoogta ah sida aad rabto, ilaa inta ay kuwani yihiin aragtiyo isku dayaya in ay sharaxaan ifafaale laftiisa iyada oo aan qiimo lahayn), sida ay tahay. horumariyo (ibid.), Meesha ay ku badan tahay, haddii iyo sida Tan loo beddeli karaa, iyo waa maxay qiimaha nooc kasta oo isbeddel ah (ama "beddelka" aan innagu nagu saabsan) sida iyo sida. Kuwani waa su'aalo ka hadlaya xaqiiqooyinka iyo tafsiirkooda, sidaas darteedna waa su'aalo cilmi iyo xirfadeed oo sharci ah. Waxay ila tahay in dhammaan su'aalahan aan lagu soo oogin wax qiimo ah. Dhanka kale, su’aasha ah in ay leexsan tahay iyo in kale, waa in loo daayaa bulshada iyo qof kasta oo ku dhex jira si ay u ogaadaan.
Dabcan haddii aad sidoo kale sameyso fikradda " leexinta " xaqiiqadeyda, sida ka leexashada heerka caadiga ah ee tirakoobka ("qeexitaanka xisaabta dhexdhexaadka ah", luqadaada) markaa cilmi-nafsiga ayaa go'aamin kara arrintan si xirfad leh, laakiin waxaad horayba ugu ogolaatay hadalkaaga halkan in xaalku sidaas maaha. Dhanka kale, halkan ayaad ku soo laabatay oo aad saxaysaa faa'iidadayda ereyga weecasho, waxaanan u malaynayaa inaad sidaas samaynayso waxaad mar kale isku dayaysaa inaad qeexdo qeexida maskaxda ee isticmaalka maalinlaha ah. Isticmaalka caadiga ah ee degmadeena weecasho waa mid xoogan (dhalatay?) U janjeerta fal dambiyeedka (sida tusaalaha kleptomania ee aan ku heshiinay, marka laga reebo ereyga "wareejin"). Si kastaba ha ahaatee, tani waa qeexitaan, taas oo ah sababta Rabbi Levinstein iyo naftayda yar (oo aad uga fog ra'yigiisa ku saabsan inta badan) waxay isku raaceen in aysan jirin meel lagu qaato awood xirfadeed. Waa maxay nuxurka la taaban karo ee fikradda, oo ay ku jiraan khaniisnimada, anigu shakhsi ahaan u muuqdaan in aan ka fekerin (sababtoo ah fikradayda ka leexashada waa u janjeera in ay fal anshax, iyo ma u janjeera in fal dambiyeed ee macnaha diinta). Waxaan u maleynayaa in aragtida Rabbi Levinstein ay tahay haa (sababtoo ah in ra'yigiisa u janjeera fal-dembiyeedka dareenka diinta sidoo kale waa leexasho, malaha sababtoo ah wuxuu tilmaamayaa halakhah oo leh akhlaaqda, taas oo aan si adag u diido oo ku biirto tangle dambe).
Guntii iyo gabagabadii, anigu ma arko wax sabab ah aduunka oo dhan in Ururka Cilmi-nafsiga ee Maraykanka ama urur kale oo xirfadle ah uu go'aamiyo dhammaanteen waxa la daaweynayo iyo waxa aan ahayn, iyo waxa leexsan iyo waxa aan ahayn. Tani waa in loo daayaa bulshada, qof walba naftiisa, iyo dabcan sidoo kale dhakhtarkiisa maskaxda (oo ka soo horjeeda ururkooda xirfadeed). Taasi waa in la yiraahdo: bulshadu waxay go'aamin doontaa haddii ay jiraan wax waxyeello u leh dadka kale (kleptomania, pedophilia, iwm.), ka dibna waa in la daaweeyaa xitaa haddii bukaanku uusan muujin rabitaankiisa (xaalad aad u daran oo ku filan). Kiisaska aysan jirin dhibaato bulsho, qofka laftiisa ayaa go'aamin doona inuu u baahan yahay/ rabo daaweyn iyo in kale. Dabcan dhakhtarka dhimirka ee uu u jeesto (oo aan ahayn ururka) wuxuu sheegi karaa inuusan dooneynin inuu daaweeyo arrintan sababtoo ah qiyamkiisa gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, anigu ma arko meel bannaan oo loogu talagalay go'aannada wadajirka ah ee urur xirfadeedka arrimahan oo kale ah.
Waxaan u maleynayaa in sawirkani uu sidoo kale caddaynayo sababta ra'yigayga ay dhab ahaantii u jirto oo ay ka baxsan tahay soo bandhigida cabbirada qiimaha maskaxda. Sida ugu fiican ee fahamkayga qaabkani waanu iska ilaalinaa tan, markaa fikradayda maskaxiyan ayaa hubaal ka dhigi kara farqiga u dhexeeya qiyamka iyo xaqiiqooyinka, sida physicist ama faylasuuf. Mar haddaan ahayn khabiir, shaki igagama jiro in khalad lagu geli karo erayadan, waana ku farxi lahaa haddii aad i saxdo.
Waxaa la mid ah xaaladda qofka jiifa daryeelka degdega ah marka wadnuhu garaaco maskaxdiisuna ay shaqada joojisay. Mucaaridku fikradayda, kuwaas oo indhahayga khaldan oo waxyeello u leh, maaha "jaahiliin," erayadaada. Ka dib oo dhan, kuwani maaha xaqiiqooyin ama aqoon nooc kasta ah, sidaas darteed waxaan ka soo horjeedaa isticmaalka ereygan iyaga oo tixgelinaya. Aniga aragtidayda akhlaaq ahaan way khaldan yihiin waana sababta ay waxyeello u geysanayaan. Mar labaad, aad bay muhiim iigu tahay inaan ka taxaddaro kala soocidda qiyamka iyo xaqiiqooyinka. Sida saxda ah sababtaas awgeed dhakhtarku wax qiimo ah oo dheeri ah kuma laha su'aashan.
Xaqiiqda ah in aad hadalkaaga halkan ku sheegtay in ficil ahaan hadalkan dhakhaatiirta loo dhiibo wax kale maaha ee waa ergo maamul, wax kalena ma aha. Tani maaha go'aan xirfadeed. Mar labaad ha isku darin qiyamka iyo xaqiiqooyinka. Dhab ahaantii u dhiib go'aanka lagu go'aaminayo dhimashada dhakhaatiirta (sida aad naftaada ugu sharaxday koofiyaddaada dhakhtar ahaan), laakiin taasi macnaheedu maaha inay tahay go'aan xaqiiqo-xirfadeed. Taas waxa loo sameeyaa si ay u sahlanaato iyo hufnaan kaliya, run ahaantiina waxa ay awoodaha sharci-dejinta u igman tahay dhakhtarka oo kaliya si loo soo gaabiyo loona habeeyo habka. Go'aami geerida, inkastoo ay tahay go'aaminta qiimaha). Go'aaminta shaqada uu qofkaas ku leeyahay xaaladdan oo kale iyo waxa ay tahay fursadda uu dib ugu soo laabanayo nolosha waa go'aan xirfadeed. Go'aanka haddii xaaladdan oo kale loo arko inuu dhintay - waa go'aan qiimo saafi ah. Waxba kuma laha xaqiiqooyinka. Si ka soo horjeeda waxaad qortay, go'aanka halakh ee ku saabsan nolosha iyo dhimashada kama duwana "go'aanka caafimaadka." Gorayada in aysan jirin wax la yiraahdo "go'aan caafimaad" oo ku saabsan nolol iyo geeri. Tani waa go'aan qiimo saafi ah (sida kor lagu sharaxay). Runtii waa run in go'aanka sharciga ahi uu ka duwanaan karo kan xalaasha ah, mar haddii ay labadani yihiin qaybo kala duwan oo caadi ah (halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwo xaqiiqo ah).
Waxaan si buuxda u ogolaanay in khaniisiinta aysan ahayn dambiilayaal. Laakiin dhab ahaantii kuma raacsanayn in khaniisiinta (kuwaas oo si dhab ah u dhaqma rabitaankooda) aysan ahayn dambiilayaal. Waxaan ku heshiinay in falkooda uusan dambi ahayn, yacnii gef akhlaaqeed (waxaan xusay in xeradii diinta ay ku jiraan kuwo si kale u fakaraya, anigu ka mid ma aha), mar haddii aysan cidna dhib u geysan. Laakin Xalaaq iyo Tawreed waa dambiilayaal, marka xag diineed iyo mid xalaal ah waa dambiilayaal si la mid ah gacan ku dhiigle ama tuug (laakin sidoo kale waa dambiilayaal akhlaaq ahaan). Heerka dambigu waa arrin kale oo dabcan ah. Halkaa waa halka ay ka soo galeen heerka doorashada iyo xakamaynta ay soo galeen iyo heerka wacyiga ah ee ah in tani ay tahay mamnuuc (qof cilmaani ah uma arko arrintan fal sharci darro ah dabcan). Sida kleptomaniac hortiisa tuug caadi ah.
Waxaa muhiim ii ah in aan xuso in marka la eego la dhaqanka khaniisiinta, aan xitaa ka xoroobo sidii aad iga filaysay. Aniga xitaa kuwa si dhab ah u garwaaqsada arrintu waxay xaq u leeyihiin in lagula dhaqmo bini'aadamka caadiga ah ee bulshada dhexdeeda (haddii uusan u ruxin oo wacdiyin, taas oo ah wacdi galmo sida sharcigu qabo). Qofka dambiilaha ah marka uu shakhsi ahaan iyo gaar ahaanba ka tirsan yahay waa qof xalaal ah oo bulshada ka tirsan, gaar ahaan haddii uu ku jiro xaalad ay adag tahay in wax laga qabto. Hore ayaan arrintan wax badan uga qoray, waana lagu soo dhawaynayaa inaad aragto tusaale ahaan Halkan iyo sidoo kale Halkan. Waxa aad is waydiisay sababta ay arrimuhu ugu soo bixi waayeen jawaabtayda jaraa’idka, sababta oo ah waxa aan halkaas kaga faallooday oo keliya doodaha aad maqaalkaaga ku soo bandhigtay oo aan nuxurka arrintu ku saabsanayn. Haddii aad ku aragto bilawga jawaabtayda dheer ee tiirka kii hore Boggayga, waxaad ogaan doontaa inaan si cad u qoray inaan ku raacsanahay inta badan gabagabadaada wax ku oolka ah. Nasiib darro nadaamku iima ogola in aan ku kordhiyo jawaabta wargeyska. Taasi waa sababta aan "wax u hagaajin" ku sameeyay labadii tiir ee u dambeeyay halkan goobta iyo doodii ka dib (hadal-celinta).
Waxaanan ku soo afmeeri doonaa miira aad ku sheegtay “saaxiibkay”, waa sidaad hadalka u dhigtay (Xitaa waan ka xishoonayaa in aan magacayga hal mar ku sheego nin cilmiyaysan). Runtii way adag tahay in la beddelo ama la jebiyo cuqdad. Laakiin su'aasha ugu weyni waxay tahay kiiska Didan kani runtii waa nacayb, ama haddii ay tahay qiimo ka duwan (meel kasta oo qiimo leh, oo ay ku jiraan adiga iyo dabcan aniga, waa nacayb xagga dareenka ah). Dhaqanka xaaraanta ah iyo hab-dhaqanka bulsheed ee bulshada diineed ee ku wajahan khaniisnimada (taasoo fikradayda aan wax lug ah ku lahayn mamnuucidda, maadaama mamnuucidda farshaxanimada ee Shabbat aysan ka yarayn oo aan helin daaweyn noocaas ah) runtii waa nacayb fikradeyda (sababtoo ah malo-awaal dhab ah ayaa la sameeyaa, ma aha oo kaliya qiyamka). Laakin aragtida khaniisnimada ee mamnuuca ah maaha cuqdad ee waa caado xalaal ah (xitaa haddii ay nasiib darro ila tahay). Dabeecadda caadooyinkan (sida caadada kasta) dabcan waxay ku xiran tahay caqiidada qof kasta oo naga mid ah. Anigu shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay bixiyaha Tawreed, in haddii uu diiday ay u badan tahay in ay jiraan wax dhib ah oo ku saabsan (kaas oo faqrinimadayda aanan helin dareen). Maankayga waxaan u leexiyaa amarkiisa. Laakiin maadaama ay kuwani yihiin su'aalo iimaanka, ma rabo in cilmi-nafsiga uu qaato jagooyin, oo hubaal ma aha kuwa go'aansan, iyaga oo ku saabsan (sida waxa ku dhacaya wada-xaajoodka afka ilma adeerteena Katooliga), iyo halkan waxaan mar kale dib ugu laabaneynaa suurtogalnimada iyo baahida loo qabo in laga gooyo cilmi-nafsiga ee qaybaha. Taasna culimadayadu waxay hore uga yidhaahdeen (ibid., Ibid.): Kaysar sii waxa Kaysar...
 Waa inaan sheegaa in ay weheliyaan laba ka mid ah maqaallada Yoav Sorek, midda lagu daabacay isla dheeri laba toddobaad ka hor iyo mid lagu daabacay bogga dheeriga ah ee Shabbat (p. Eeg), tani waa doodda ugu caqli badan uguna habboon ee loo yaqaan aniga oo ku jira saxaafadda ama dhammaan mawduucan. Sharafteyda in aan ka qayb qaato.
Ka leexashada, Khibradda iyo Qiimaha - Jawaabta maqaalka Prof. Yoram Yuval, "Ma leexdaan", Shabbat P. P. Akev Supplement (Column 25)
'Hefza' ee Tawreed - jawaabta maqaalka Rabbi Yehuda Rak
Halacha iyo xaqiiqada - waa maxay khibradda halakhic
8 Fikradaha ku saabsan "Dhaqdhaqaaqa, Khibradda iyo Qiimaha - Jawaabta maqaalka Prof. Yoram Yuval," Ma leexleexan ", Shabbat Supplement P. Akev - Tiirka sii socda (Column 26)"
30 Tishrei 10 - 2016/12/31 saacada XNUMX:XNUMX
Ugu horrayn, waxaan rabaa in aan sheego in aan aad ugu riyaaqay oo aan sidoo kale ka bartay warqadaha iyo hadalka, qoto dheer iyo xitaa gabagabada oo aad labadiinuba isku raacdaan mabda'a.
Si kastaba ha ahaatee, weli ma dareemayo inaan fahmay sababta aad ugu adkaysanayso inaad u qeexdo leexashada inay tahay u janjeera dembi-diid oo aanay ahayn uun ka leexashada caadada? Heerka ka leexashada heerka caadiga ah ee u baahan faragelin ama daaweyn runtii waa qiimo leh, laakiin ka leexashada midka caadiga ah waa sharci.
Waan ka cudur daaranayaa inaan Foucault ku soo celiyo hadalka, laakiin waallida Da'da Sababta, Foucault si sax ah ayuu uga hadlay waxaanan fahamsanahay inaan gaari doono gabagabo isku mid ah iyo mawduuc isku mid ah oo lagu kala saaro xaqiiqooyinka (ka leexashada qalooca caadiga ah) iyo qiyamka (dhammaanteen waynu ka leexannay Ama buug-ururinta waa qiimo)
Ma jirto wax caqabad ah in habkan loo qeexo weecasho. Qeexitaanadu waa arin adiga kuu taal. Laakiin waxaan filayaa in tani aysan ahayn qeexitaan la aqbalay oo hubaal maaha waxa Rabbi Levinstein uu damacsanaa oo aan halkan kaga hadlayno. Sidaa darteed, annagu (Yoram Yuval iyo I) waxaan ku heshiinnay inaanan u qeexin qaab xisaab iyo dhexdhexaad ah. Isticmaalka maalinlaha ah " leexleex" waa odhaah leh macno taban oo cad. Sida ku cad taladaada, Rabbi Levinstein wuxuu si fudud u yidhi wax aan qiimo lahayn oo aan qiimo lahayn, haddaba maxaad uga doodaysaa?! Ma jiro wax khilaaf ah oo sheegaya in khaniisnimada dhabta ah ay tilmaameyso tiro yar oo dadweynaha ah. Doodda (oo uu la jiro Rabbi Levinstein) waxay ku saabsan tahay daawaynta saxda ah (halkan sidoo kale Yuval iyo anigu waan oggolahay, marka laga reebo ereybixinta iyo ku habboonaanta maamulka xirfadda ee doodda). Hal hab ama si kale, dhammaan doodaha halkan waxay ku yaalaan diyaaradda qiimaha leh ee maaha mid xaqiiqo-xisaabta ah.
Ma fahmin faallooyinkaaga Foucault. Ka dib oo dhan, annaga qudheenna waxaan ku soo celinnay Foucault hadalka (ka dib markii aan ku heshiinnay dabeecadda guud ee xun ee ku wajahan), halkan isagu runtii waa sax (saacad taagan, iwm.). Labadeenaba waxaanu ku raacnay hadalka Foucault (buugga aad sheegtay) ee ah in ogaanshaha cudurka dhimirku uu ku salaysan yahay qiimaha iyo malo-dhaqameedka. Laakiin waxaan u maleynayaa in taasi tahay sababta dhabta ah ee dhakhtarka dhimirka uusan u xiran karin koofiyadiisa xirfadeed ee doodda halkan (ka dib oo dhan, kuwani waa qiyamka iyo xaqiiqooyinka).
Tani (iyo tan kaliya) waa dooda hadda ina dhex taal. Dood isku mid ah oo gebi ahaanba la mid ah waxay ku saabsan tahay ku habboonaanta awoodda xirfadeed ee dhakhtarka marka la eego go'aaminta xilliga dhimashada. Laakiin tani waa isla dood lafteeda.
Dhibaatada akhlaaqda ee dhammaan mamnuucista jinsiga, waa in qofku uusan ku dembaabin naftiisa oo kaliya, laakiin wuxuu caawiyaa oo xoojiyaa lammaanihiisa dembiga.
Marka xiriirka xaaraanta ah la dhiso oo ay dad badan u muuqdaan ceeb la'aan - markaas cabbirka tusaalaha xun ayaa lagu darayaa kuwa badan iyo hadallada dadweynaha ee ah in tani ay bannaan tahay, odhaahdaas oo saameyn xun ku leh wiilasha weli ku jira xaalad. shaki, iyo tusaale taban ayaa xumaan kara mamnuucida.
Dhammaan reer binu Israa'iil way isku xidhan yihiin, oo ficillada shakhsiga ah waxay saameyn ku yeelanayaan xukunka oo dhan. Aan dhammaanteen mudnaan gaar ah u yeelanno inaan mid mid u wanaajino waxa uu u baahan yahay hagaajin, oo uu sidaas ku xukumo adduunka oo dhan midigta.
Salaam, S.C. Levinger
Markaad sidaa samayso waxaad mamnuucid kasta u beddeshay dembiyo akhlaaqeed. Ka dib oo dhan, sida ku cad masaalka godka markabka, xitaa dembiyada aan ku lug lahayn qof kale ayaa dhab ahaantii saameeya qaddarkiisa. Markaa sida ku cad Tawreed oo dhan waa akhlaaqda.
Hadii aad sharaxi waydo in xaaraanta kaligiis ay tahay mid akhlaaq ah, macno ma samaynayso in laga hadlo in ay tahay mid akhlaaq leh, sababtoo ah cabbirkeeda fashilka iyo waxyeelada. Kani waa tautology qabyaaladeed.
30 Tishrei 10 - 2016/12/34 saacada XNUMX:XNUMX
Rabbi Avraham Neru - Hello,
Runtii, dhammaan xadgudubyada doonista Ilaah waa anshax-xumo, waxaynu leennahay ammaanta Abuuraha, labadaba inaynu ahaanno 'lakiilaha guriga' adduunka, iyo mahadnaqa dhammaan nimcadiisa nala jirta.
Isla mar ahaantaana dhowr mamnuuc oo ka mid ah qaraabada, kaas oo kor u qaadaya si aan u dhisno nolol qoys oo caafimaad qabta, oo kaliya maahan dareenka, laakiin qiimaha jacaylka, daacadnimada iyo naxariista, taas oo aabbaha iyo hooyada midba midka kale faa'iido u leeyahay oo ay beeraan aan dhammaad lahayn. jacayl iyo daacadnimo.
Laakiin marka laga reebo sharafta Abuuraha, waxaa sidoo kale jira waajibaad aasaasi ah oo ixtiraamka waalidka. Intee in le'eg ayay rajo-xumo ku tahay waalidiinta marka ubadkoodu uu ku dhaco nolol taas oo dhan ay tahay mamnuucid daran, nolol aan jirin fursad lagu dhiso 'Jiil Barako leh' oo sii wadi doona waddada Yuhuudda?
Qofka garanaya inta waalidkii u maal-galiyeen iyo inta ay naftooda u hureen si ay isaga u keenaan adduunka si ay isaga u koriyaan waxna u baraan – waxa ku waajib ah in uu dadaal kasta u galo sidii uu uga bixi lahaa halkii uu ku dhacay.
Sida waalidku inta badan u maro daweyn adag oo jidh ahaan iyo maskax ahaanba ah, si ay u helaan mudnaan gaar ah inay laabta ubadka, haddii ay ku guulaysan waayaan daawayntan, isku dayaan daaweyn kale, oo aysan ka quusan - hadda waxay ku xiran tahay ilmaha. oo lahaa lacag la mid ah in uu maal gashaday waalidkiis. Gabar Yuhuudi ah. Tani waa waxa ugu yar ee uu u gudi karo dhammaan nimcooyinkii ay isaga u sameeyeen.
Xitaa daaweeyayaasha aan hubin in qofna uu bedeli karo, waxay yiraahdaan waxaa jira guulo. Xataa marka u janjeera qaniisiinta ay tahay mid xooggan oo kala duwan, taas oo markaa aad u adag in la beddelo - ayuu yidhi Dr. Zvi Mozes (maqaalkiisa, 'Ma daawaynta Dib-u-celinta Dib-u-celinta Nafsi ahaan wax ku ool ah', bogga 'Root'), in dadku aad u badan yihiin. go'aansan yihiin oo ay leeyihiin iimaan xoog leh, waxay bilaabi karaan qoys, iyadoo la kaashanayo daryeelka xirfadeed ee habboon.
Korsashada iyo korsashada, ka sokow xallinta dhibaatada mamnuucida, waxay ku lug leedahay murugada waalidkii laga soo qaaday ilmaha. Korsashada baahida loo qabo korsashada lammaanaha isku jinsiga ah waxay si lama filaan ah u horseedi doontaa isbeddelka adeegyada daryeelka si loo kordhiyo 'sahayda' iyada oo si xad dhaaf ah loo isticmaalo korsashada halkii uu ku dadaali lahaa inuu ubadka uga tago gacanta waalidkiis.
Si ka sii badan sida 'qalliinka' waa ka faa'iidaysiga dhibaatada xun ee qoysaska. Ma jiro qof dumar ah oo caqli-gal ah oo soo mari doonta silica uurka iyo dhalmada, si ilmo loo siiyo shisheeye, laakiin taas beddelkeeda waxay ku jirtaa dhibaato dhaqaale ama maskaxeed oo aad u xun, oo yaa og haddii ururada dembiilayaasha iyo maamullada musuqmaasuqa ah aysan ku lug lahayn?
Sida aan qoray, waxaas oo dhami waxay noqon karaan run, haddana dood aan khusayn doodda. Su'aashu waxay tahay waa maxay dabeecadda mamnuucista laftooda, ee ma aha inay jiraan dhinacyo anshaxeed oo ka dambeeya.
Intaa ka sokow waxaa jira qoraalo ku saabsan jirka waxyaabaha:
Waa abuurihii abuuray insaanka oo leh dareenkiisa. Ma hubo inaan arko waajib akhlaaqeed oo saaran nin inuu taas beddelo.
2. Jahwareerka waalidku wuu jiri karaa, laakiin waxaa jiri kara xaalado uusan jirin. Maxaa haddaba? Azla waajibaadkeeda akhlaaqda? Intaa ka sokow, inkasta oo aanan hubin haddana waxaan filayaa inay jiraan lammaanayaal sidan oo kale ah oo korinaya caruur kuwaas oo ilaalinaya xabaalaha. Waxaan u maleynayaa "ma jirto fursad" waa jumlad aad u xoog badan.
3. Insaanku "ma dhicin" laakiin "waa la qabtay."
4. Dhammaan doodahani waxay ka hadlayaan waajibka ah in la beddelo (haddii ay suurtagal tahay), laakiin ma tilmaamayaan dhibaatada akhlaaqda ee ficilka laftiisa.
5-Qofku maaha inuu wax ka beddelo qaab nololeedkiisa sababtoo ah waxay dhibaysaa waalidkii. Waxa la og yahay Rikiga oo laga soo xigtay Rama Yod in wiilku aanu ku qasbanayn inuu u hoggaansamo waalidkii marka uu dooranayo lammaanaha, taasna waxaan ku sii dheeraaday maqaalladayda ku saabsan ixtiraamka waalidka.
6. Waxaa jira daaweeyayaal badan oo soo sheega guuldarrooyin iyo burbur aad u xun. Maan gelin su'aasha ah in daawadu aysan shaqeyn karin, laakiin waxaad xaaladda u qeexday si aad u qurux badan. Shuruudaha looga baahan yahay qofku inuu galo khatarahaas waa inay ahaato mid aad u adag. Mar labaadna, xagga diinta waxaa hubaal ah in shuruud noocaas ah ay jirto, laakiin inaan u arko waajib akhlaaqeed aad baan uga shakisanahay. Ma jirto mahadnaq ku waajibinaysa qofka inuu galo silica xun iyo khataraha maskaxeed. In waalidiintu ay geli doonaan daawayn beddelaad ah oo maskaxdooda beddela oo ka takhalusi doona niyad-jabka, aad bay u fududahay oo aad bay u jecel yihiin (anshaxeed, ma aha halaqic).
7. Faallooyinka ugu dambeeya waa tilmaan aad u xaglid ah oo dhinac kaliya ah (oo waxaan isticmaalaa luqad aad u jilicsan). Waxaa kuu cad in haddii aan si dhab ah loo mucaaradin iyo xaaladdan aydaan sidaa u arki lahayn. Ku-wareejintu waa heshiis ka dhexeeya dadka waaweyn. Wax kasta oo ka dhalan karana waa in lagu dadaalo oo laga hortago. Dib uma dhigayso falka laftiisa. Sadaqadu waxay sidoo kale keeni kartaa in dadku ay ka dhamaadaan lacag, waxaana laga yaabaa inay xadaan. Yigal Caamir ayaa la sheegay in uu aaminsan yahay diin taas oo keeni karta dil iyo falal xad dhaaf ah. Tani ma sababta iimaanka diinta looga tanaasulay?
Sida caadiga ah, marka aad kor u qaaddo dhammaan noocyada doodaha iyo sababaha qaar qof walba ilaa meesha ugu dambeysa ee isla jihada, waxaan ka shakin lahaa oo dib u eegayaa xukunkayga.
Adiga oo aan si faahfaahsan u gelin dhammaan qodobbada aad soo bandhigtay - waxaan ka dhigi doonaa hal faallo oo keliya oo ku saabsan khatarta lagaga hadlay daaweynta beddelka.
Marka hore waa in la fahmaa in daweyn kasta oo loo fidiyo aysan ahayn mid ku habboon, waxaana jira daweyn qof ku habboon oo qof kale wax u dhimi kara, sida daroogada oo kale, halkaas oo wixii ku caawiya uu kan kale u keeni karo albaabka dhimashada, markaa. sida daawadu wax walba waa in uu sameeyaa cilmi-nafsi yaqaan kale oo takhasus leh Baaritaan taxaddar leh iyo hagaajin taxaddar leh oo dabeecadda daaweynta qofka.
Marka labaadna, waa in la ogaadaa in cilmigu uu mugdi ku jiro mugdiga marka ay timaaddo dhammaan arrimaha khaniisnimada (sida, qayb weyn oo mugdi ah waa ikhtiyaari, si miyir leh oo xannibaya isku day kasta oo lagu helo waddo ka baxsan, sababtoo ah waayo-aragnimadu waa bidco iyo sharcinimada aqoonsiga khaniisnimada).
Mid ka mid ah khataraha ugu waaweyn ee loo aaneynayo isku dayada bogsashada ayaa ah cabsida rajo-xumada guud sababtoo ah fashilka isku dayga daaweynta. Si kastaba ha ahaatee, marka aad horay u ogaatid in kuwani yihiin daaweyn cusub oo tijaabo ah - heerka rajada waa mid aad u dhexdhexaad ah, sidaas awgeed niyad jabka guuldarada ma duminayso qofka. Oo faham in waxa aan 'tagin' wakhtigan sidan oo kale ah, laga yaabo inay ku guuleystaan ​​berrito jiho yar oo ka duwan, 'iyo haddii aysan ahayn berrito markaa maalinta xigta berri' 🙂
Dhinaca kale, waa in laga bilaabo bilowga rumaynta in Eebbe uu banii-aadmiga caqabad weyn ku soo rogay si uu dawo ugu helo dabcigaas ka soo horjeeda Tawreed. Dhanka kale, anagoo og in dariiqa ina horyaala uu dheer yahay oo aan weli xal cad loo helin.
Tani waa kiiska dhammaan dhibaatooyinka bini'aadamka, marka lagu dadaalayo in la helo daawo - horumarsan. Mararka qaarkood tobanaan sano ayaa dhaafa, marna boqollaal, iyo weliba in ka badan, haddana ha quusan oo aad u dheeraato oo sii wadaan raadinta jiha kasta oo suurtagal ah, ilaa si lama filaan ah u yimaado horumar.
Marka hore, kuwani waa warbixinno ka yimid khabiiro cilmi-nafsiyeedka.
Midda labaad, mar hadday daweyn waayeen oo wax walba ay ceeryaamo ka buuxaan sidaad sheegtay, haddaba maxaad ka filanaysaa ninka? Si aad u noqoto mid akhlaaq ah oo aanad noqon khaniis la'aan daaweyn waxtar leh?
A. Raadi xal.
La-talinta khubarada iyo akhrinta suugaanta mihnadlayaasha ah, waxay qofka u keeni kartaa fikrado cusub oo ku saabsan shakhsiyadiisa iyo sababaha dhibkiisa, kuwaas oo laga yaabo inuu keligiis xalal cusub u helo, laga yaabee xitaa tilmaamo aanay khubaradu ka fikirin.
B. Dhibka ka dhig caqabad.
Sida ay dadku ugu raaxaystaan ​​inay isku dayaan inay ku dilaan arrin aan caddayn gudaha Gemara ama 'Edges'. Halkan ninku wuxuu helay tartan soo jiidasho leh - si uu u jebiyo halxidhaalaha noloshiisa. Is waydii maxaa jacaylkiisa iyo xamaasadiisa kiciyaa maxaase dajiya? Aqoonso maxay yihiin sifooyinka uu jacaylkiisa u qabo asaagiis? Waxaana laga yaabaa inay sidoo kale jirto naag leh sifooyinkaas oo sidoo kale kicin kara jacaylkiisa oo hadhow xitaa laga yaabo inay dhalaaliso fadhiidnimada 'jinsiga dheeraadka ah' ee soo jiidashada galmada.
saddexaad. Sidoo kale samee xoogaa dareen naxariis leh oo ku wajahan 'tooska'
Kuwa la kulma waayo-aragnimada adag ee aan loo dulqaadan karin ee ah inay maraan waddo ay si joogto ah ula kulmaan haween kuwaas oo dhar kasta, ama aan labbis la'aan, loogu talagalay in lagu kiciyo dareenka dadka waddada maraaya.
D. Si aad u ogaato sida loo 'pargan' naftiisa guul kasta, xitaa mid yar iyo qayb ahaan.
Inaad ka fikirto sida uu Abuuhu ugu faraxsan yahay guul kasta, iyo diidid kasta oo dareen. Marka hore ku farxi doona diidmada dareenka dhowr saacadood; Ka dib dhowr maalmood, iyo ka dib in ka badan. Sida dareenka xumaantu marba mar u timaaddo, wax yar u bilowdo oo wax badan ku sii wado, sidaas oo kale 'ilaa xad' dareenka wanaagsan - wuu socdaa ilaa maanta!
Ilaahow. Inaad isku mashquuliso waxyaabo xiiso leh.
Waxbarasho, shaqo, muusig, tabaruc iyo wixii la mid ah. Sow kanu ma aha wixii uu ina baray Fircoon oo ahaa boqorkii Masar ee ahaa: ‘Shaqadu dadka ha sharfeen, hana ku badbaadinina beenta’, oo ka duwan culimadii ina baray.
iyo. Ha ku dhex quusin 'dhibaato'.
Waa run.Dhibaatada' waxay noqotaa 'aqoonsi'. Faham in mid kastaa leeyahay hamigiisa iyo dhicitaankiisa, iyo si ka duwan 'wanaagga faraha badan' ee ugu sarreeya iyo guulaha ayaa badan. Sida Masar ay ku saabsan tahay guul-darrooyinka, waa in dhowr jeer lagu farxo guusha nolosha iyo camalka wanaagsan, taas oo si sax ah ay ula socdaan murugo iyo dhib, aad iyo aadna qaali ugu ah goobta.
P. "Waayo, farxadda Ilaah waa xooggaaga."
Mar kasta oo la dareemo joogitaanka Ilaah ee adduunka - waa sii badanaysaa farxadda isaga ku jirta. "Mar walba Rabbiga horteyda ayaan ku weyddiistaa, maxaa yeelay, midigta ku dhici maayo", iyo sida xertii ay dalbadeen: 'Waayo, farxad baad ku soo bixi doontaan' - farxad. In uu Eebbe la wadaago dhammaan dhaqdhaqaaqyada nolosha, iyada oo la aqoonsanayo wax kasta oo wanaagsan oo la waydiinayo wixii maqan, qofka laftiisa iyo dhammaan bulshada. Markaad nolosha ku soo dhawaato farxad iyo iftiin - waxaad tuurtaa dhammaan caqabadaha.
Kuwani waa qaar ka mid ah aasaaska u ah la qabsiga geesinimada, waxaana la qiyaasi karaa in qof kastaa uu ka heli karo waayo-aragnimadiisa ama waayo-aragnimadiisa dadka kale talooyin aad u wanaagsan, 'Caqli iyo caqliba ha ogaadaan wax badan'.
salaan. Hal jumlad oo aad leedahay kuma raacin. Laakiin markii aan bilaabay in aan uga falceliyo (isku-dhafka soo noqnoqda ee u dhexeeya akhlaaqda iyo xalalka, fikradda akhlaaqda oo gebi ahaanba qalloocan, iyo wixi la mid ah), waxaan gartay mar uun in taasi aanay ahayn khilaaf. Arrimuhu waa uun xad-dhaaf. Haddii aad ii ogolaato, waxaan filayaa in sheekada soo socota, oo aan mar ka maqlay Rabbi Shalom Shevdron, ay qodobka si cad u caddaynayso. Waxa uu sheegay in mar uu arkay wiil wadada ku dhacay oo dhaawac soo gaaray, kadibna uu soo qaaday oo uu u cararay Isbitaalka. Intii ay jidka ku jireen, dadka daaqadaha ka soo baxay iyo kuwii ag marayayba waxay ku qaylinayeen salaan, sida "Rabbi Shalom, daawo dhammaystiran" (dabcan Yiddish). Markaasuu orday oo orday oo dadkii oo dhami ay damceen. Daqiiqado ka dib waxa uu hortiis ku arkay naag u soo socota meel fog, dabcan iyaduna way ku qaylisay, sida dadka kale oo dhan, "Rabbi Salaam, bogsiin dhammaystiran." Si qunyar ah ayuu ugu soo dhawaaday, codkeeduna xoogaa wuu daciifay. Dhammaadkii markii ay ugu dambeyntii aragtay cidda uu yahay (= wiilkeeda, dabcan) ayay bilawday in ay aad u qayliso. Halkaa marka ay marayso rabitaankeedii iyo taladeedii way dhamaatay. Turjumaada bilaashka ah: Waxaan mar arkay nin ku dhibtoonaya noloshiisa oo dhan sababtoo ah cillad ku dhalatay. Noloshiisii ​​oo dhan markii uu si culus ugu socday rarkiisa qof kastaa wuxuu u sheegay, "Waa inaad ka dhigtaa dhibka caqabad," ama "In aad fahanto shakhsiyaddaada." Qaar kale xitaa waxay siiyeen talo bilaash ah: "Dhibku waa la dhisi doonaa." Waxaa laga soo xigtay isagoo leh "Finals from tuulooyinka". Ku darso "ogow sida aad naftaada ugu ammaanto guul kasta, xitaa mid qayb ah." Qaar kale waxay u tageen in ay ku wargeliyaan: "Dareen naxariis ah oo naga mid ah in aynaan silcin oo aynaan ka soo gaarin caddibaadda maraqa" (= maxaa xiiso leh!). Ama "Naftaada ka qaybqaado raadinta xiisaha leh, halkii aad si joogto ah ugu quusin lahayd dhibaato." Dabcan, dabcan, "farxadda Ilaah waa xoog." Mehadrin oo ka socda Mehadrin ayaa halkan ku dari lahaa: "Run, ku dhawaad ​​qofna runtii ma guulaysan, laakiin waxaan maqlay in tirada badda ay jiraan kuwa qaata boqollaal dahab ah mushaharkooda iyo bukaannada (haddii la siiyay ixtiraam dhab ah dabcan iyo haddii ay u tageen xirfadlayaasha dhabta ah dabcan) haa waa ku guulaysteen. Allaha u naxariisto Rabbii salaam.” Ma hubo sida aad dareemayso haddii aad xaalad sidan oo kale ah ku jirto oo qof kuu keeno dhammaan taladan wanaagsan. Waan garanayaa waxa aan dareemi doono. Waad dhammaysay oo waxaad tidhi qof kastaa wuxuu khibradiisa ka heli karaa talo wanaagsan oo dheeraad ah. Waxaan kuu sheegayaa talada kaliya ee wanaagsan ee aan ka soo qaato waayo-aragnimadayda la xiriirta xaaladdan oo kale: in waxa ugu dambeeya ee qofku u baahan yahay waa talooyinka noocaan ah iyo wixii la mid ah. Waxay ila tahay inay dhaanto inuu runta qirto oo uu yidhaahdo talo ma hayno, laakiin maxaan sameeyaa oo Aabbahayga jannada ku jiraa ayaa igu xukumay ( amar diineed iyo mid akhlaaq darro ah).
Waxaa suurtogal ah in erayada Rabbi Levinger lagu sheego si dabacsan, sababtoo ah wuu ka fog yahay dhibaatada. Isaga iyo kuwa kale waxaa laga yaabaa inaysan dareemin sida hooyada wiilkaas. Taasi maaha in la yidhaahdo maaha jawaab sax ah. naxariistii iyo dhibkii xaalku lahaa ka dib, erayadiisu waxay si xun u soo koobayaan waxa laga filayo khaniis diineed inuu sameeyo. In ka badan in - erayada uu soo koobin ma xun waxa Yuhuudi kasta laga filayo inuu sameeyo. Qof walba waa loo naxariisan karaa ( Naxariistu waa qaraabo sida la wada ogsoon yahay), dhammaanteen dhib iyo dhibaato ayaa ina haysata, waana sida uu Yahuudigu wax uga qabto.
Kow, in qof dhibka ka fog yahay waa in uu u soo dhawaado ama aanu ku hadlin sii fogaanshiyaha iyo halku-dhegga noocaas ah.
Ka hadli maayo jawaabaha oo kaliya ee waxa aan ka hadlayay qaabkii loo yidhi. Laakiin xitaa jawaabaha laftoodu waa khaldan yihiin. Marka hore, halkan wax dhib ah oo xagga akhlaaqda ah ma jiraan, waana meesha ay dooddii oo dhammi ka bilaabantay. Marka labaad, inta badan talooyinkani ma aha kuwo waxtar leh. Qaar baa xaqiiqada u soo bandhiga si xul ah oo eex ah. Qayb kalena waxay ugu raaxaystaa qalbi qabowjis. Isla qofka dhiban ayaa go’aansan kara inuu Kari ka adkaado lagana yaabo inuu guulaysto, balse ma siin kartid talo dhanka uu Kari ka adkaan karo iyo in farxadda Eebbe ay tahay dhufayskiisa. Dabadeedna ku sii darso inuu faasiq yahay sababtoo ah wuxuu niyad jabiyaa waalidkii iyo kii abuuray.
Ka sokow, fursadda ma awoodo inuu la qabsado, si la mid ah mid kasta oo naga mid ah aanu ku guulaysanayn xaaladdiisa. Waxaan filan lahaa tixraac taas sidoo kale. U sheeg inaysan ahayn wax laga cabsado, maadaama ay tahay hawl aad u adag oo ku dhow inaan suurtogal ahayn. Tani waa halkii laga soo xigtay aayado madhan iyo khabiiro aan caddayn oo lagu soo xushay tweezers oo aan isaga caawinin (haddii aysan ahayn "xirfadlayaal", oo ka duwan dhammaan dhakhaatiirta cilmi nafsiga ee adduunka, laakiin haddii uu rumaysto oo la go'aamiyo.
Haddii aad saaxiib dhow la tahay qofkan oo kale oo aad awood u leedahay inaad ku dhiirigeliso tallaabo go'aansan oo aad ku taageerto - waa suurtogal. Laakin maaha sida talo guud oo dugsiyeedka wax ka qabashada xaaladdan xun.
Hadalkaygu wuxuu dhawaan halkan ku iman doonaa, halkaasna way ka sii caddaan doontaa.
XNUMX-kii Ceelul, XNUMX
Khamiistii la soo dhaafay, Rabbi Michael Avraham Neru ayaa waydiiyay "maxay tahay in ninku sameeyo" si uu uga baxo xaaladdiisa. Oo waxaan go'aansaday inaan sameeyo dardaaran xaq ah, waxaana uga jawaabay su'aashiisii ​​sidaan ogahay iyo sida aan khibrad u leeyahay.
Sida Yuhuudi, oo, sida dadka kale, 'ka marag kacay tacabur badan', soo maray qalalaasaha iyo hirarka, kor iyo hoos, iwm, iwm. - Waxaan soo koobi karaa siyaabaha ficil iyo fikirka in ay tahay in aan gacan ka geysto wax ka qabashada dhibaatooyinka i. lagana yaabo inuu dadka kale ka caawiyo sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinkiisa.
Runtii waxaan ilaaway qodob kale, kaasoo ku soo baxay hadalkaaga, lagana yaabo inuu ugu horeeyo:
H. Ku ilaali degenaanshaha iyo degenaanshaha xaaladaha ugu walaacsan.
Maxaa ku siin doona maxaase kaa dhigi kara inaad xanaaqdo? Markaad wax ka qabato walaaca, jaahwareerka iyo ' walbahaarka' - kaliya waxaad geli doontaa oo kaliya oo aad dhoobada aad u badan tahay.
Haddaba isqabso, oo si deggan u falanqee xaaladda. Mawduuca waxaad ka baran doontaa buugaag iyo xirfadlayaal; Oo aan ka sii muhiimsanayn, naftaada baro: si aad u ogaato waxa ku dejinaya iyo waxa ku soo koray? Maxaa dhibaya maxaase nasteexo ah?
Runtii tani waa waxa ay sameeyaan khubarada cilmi-nafsiga iyo la-taliyayaashu: kula fadhiiso oo kula samee 'xisaabta maskaxda', ka dibna aad u ogaato asalka dhibaatada iyo siyaabaha aad u xallin karto.
Faalladaada ku saabsan 'hooyada ilmaha', oo xaaladda wiilkeeda si dhab ah u qaadata, ma cadda. Waxaan sidoo kale ka faallooday dhibaatada xun ee waalidku ku hayo dhibaatada wiilkooda, dhibaatada jirta xitaa haddii ay ka adkaadaan oohintooda qalbigooda.
Xataa Yischak, oo ku socda amarkii Eebbe ee ahaa inuu xidho - qalbigiisu aad buu u murugaysan yahay murugada hooyadii oo 'wajigiisii ​​beddeshay, wiilkii sagaashanka sano dhashay, wuxuu ahaa dab iyo cunto, waan ka xumahay haddii hooyadu ooyo iyo baroor'. Aan ku barakaysnaano Yuusuf ahaan in sawirka waalidkeen uu inoo soo istaagi doono inta lagu jiro tijaabada adag.
Marka hore, inkasta oo aan hareerahayga eego, halkan kama helayo nin xaq ah oo rabitaankiisa uu rabo inuu fuliyo, waa inaan ka cudurdaartaa waxyaalihii aan qoray ee duufaanta doodda. Mudane, sidii caadada u ahayd hadallo xanbaarsan iyo asluub ​​leh, anigana xumaantayda nin duufaan leh.
Waxay iila muuqataa in gadaal ay ka jireen weedho aad ka sheegtay anshax-xumada arrinka, kuwaas oo aan aad uga soo horjeestay, raad iyo shaabadna ku reebay xataa erayadii kale ee qadhaadhaa ee ka dambeeyay. Waxa aan filayaa in ay sidoo kale jirtay hal dhinac oo wax u soo bandhigay, waxa ay ila muuqatay in ay iga yara fogaatay.
Ugu dambayntii, waxa laga yaabaa inay suurtogal tahay in qof aan go’aansanin hadalkaaga caawimo loo helo, laakiin haddana waxaan qabaa inay habboon tahay in la soo dhex dhigo xaalad yar oo kale, sida aan ku celceliyey intii dooddu socotay.
Wanaag iyo marlabaad waan ka xumahay.
Ku dheh qofka xanuunsan: waad luntay. Fursad ma lihid. Ma jirto wax faa'iido ah in la aado isbitaalka gabi ahaanba. Toos u aad xabaalaha.
Markaa ka cawdo is-dilid. Oo malaga yaabaa in nimanka wanaagsan ee noocaaga ah ay u keenaan kuwa dhiban oo quus ah oo isdila?
Waxaa jirta hab kale sidoo kale. Waa suurtogal in la siiyo talo wax ku ool ah (in kasta oo ay jirto nasiib darro aad u yar, oo ay habboon tahay in si daacad ah loo caddeeyo oo aan la caddeynin), laakiin talada la'aanteed ma aha talooyinkan, iyo iyada oo aan raaxo la'aanta dhibaatada leh ee aad bixisay waxay sii kordhinaysaa niyad-jabka (halka ku xooggan farxadda Eebbe).
Waxaana hubaal ah in aanay sax ahayn in lagu sawiro sawir qurux badan oo aan la isku hallayn karin (sida haddii guul-darrooyinkani yihiin daaweeyayaal aan xirfad lahayn, iyo sida haddii rumaystahu uu guulaysto).
Oo xataa in yar oo run ah in loo sharaxo inay faasiq yihiin sababtoo ah waalidkood ayaa ku maalgeliyay iyaga oo abuuray iyaga ayaa ka sugaya iyaga oo kaliya inay ku guuldareystaan ​​oo ay ku koraan iimaankooda. Makaa dhab baa? Sidan baa loogu jawaabay dhibkii (R. Barar iyo Yitzha AA, XNUMX)?
Iyo sidoo kale fikradda akhlaaqda ee aad soo bandhigtay. Iyo in haddii waalidkay rabaan inaan boqol kiiloogaraam dhabarka ku qaado noloshayda oo dhan waa inaan u sameeyaa mahadnaq? Ma jirtaa dacwad damiireed oo kale? Mar hore ayaan ku xasuusiyay Maharik doorashada qofka uu guursado. Waxaan xusayaa inaynu ka hadlayno akhlaaqda ee ma aha xalaal. Waa in ay jirtaa kharash sidan oo kale ah. Laakin in la yiraahdo waxaa jira dacwad akhlaaqeed? Cafiska, waa qalloocan. Guud ahaan, mahadda Eebbe ma fududa, aniga aragtidayda ma leh akhlaaqda ee waa falsafad. Halkan ka eeg maqaallada:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר Waxaas oo dhan, aad bay muhiim u tahay in iyaga loo qalbi qaboojiyo in xitaa haddii ay ku guuldareystaan, ku dhawaad ​​qof kasta oo kale uusan u istaagi doonin. Oo waxaan horeba u helnay in Ketubot Lag haddii aan iyada si Hananyaah Mishael iyo Casaryaah xidhxidhay qaybaha in sawir qaade, magacaabay si fiican u farqiga u dhexeeya silic khafiif ah oo joogto ah iyo silica weyn, laakiin maxaliga ah iyo waqti yar.
Erayada ku saabsan suurtogalnimada guusha waa erayada Dr. Zvi Mozes, agaasimaha Machadka Shiloh, mid ka mid ah xirfadlayaasha ugu sarreeya qaybtayada. Oo wuxuu si cad u sheegay in haddii ay dhacdo u janjeera cad isbedel waa mid aad u adag, laakiin dadka aadka u go'aan iyo caqiido adag waxay ku guuleysan karaan hagitaan xirfadeed habboon.
Inta kale hadalkayga waa wax cad. Ma kula tahay in Rabbi Kolon uu damacsanaa inuu qofka u ogolaado inuu guursado si uu u xasuusto? 🙂 Yaa u oggolaaday nin inuu waalidkii ku raaco meesha allabariga ee damacyadiisa? Haddaanu u cararin qasriga, madaw buu xidhan doonaa, oo madaw, iwm.
Midna dhibkiisa kama badbaado dhibaatada. Weydii shaqaale bulsho kasta wuuna kuu sheegi doonaa
, In aasaaska curiyayaasha ay tahay in qofka laga saaro dareenka dhibbanaha. Mar haddii qofku qaato mas'uuliyadda masiirkiisa - wuxuu mar hore heli doonaa jid uu ku badbaado. Oo haddii ay tahay wax laga xumaado - sidoo kale waa xanaaq, luqadda xanaaqa ..
Si kasta oo loo ixtiraamo "qaybteena" waxaad iska indha tiraysaa mawqifyada kala duwan ee maanta ku dhow inay yihiin kuwo la isku raacsan yahay (Anigu ma ihi khabiir oo waxaan sidoo kale ka qabaa shakiyo ku saabsan is-afgaradkan, haddana waxaad iska indho-tiraysaa qalinka oo kaliya. sababtoo ah Dr. Sidaas-iyo-sidaas ayuu yidhi). Waxaa intaa dheer, xitaa ereyadiisa, ugu yaraan sida aad u soo xigatay, aad bay u diidan yihiin. Waxa kale oo aan odhan karaa haddii aad rumaysataan oo aad go’aansataan oo u janjeedhaagu aanay dhammaystirnayn waad ka gudbi kartaan. Immisa ayaa jira? Iyo imisa kale? Immisa ayaa ku guulaystay? Ma wuxuu bixiyay tirooyin? Cilmigu waxa uu ku shaqeeyaa qiyaas qiyaaseed ee kuma shaqeeyo hal-ku-dhegyo (laga yaabee in uu isagu wada keenay, laakiin waxa aad tidhi waxba kamaan arag).
Inta kale aad bay u caddahay, sida kuwii iyaga ka horreeyay oo kale. Yaa halkan sheegay in Maharik ay damacsan yihiin in la xasuusto? Iyo in aan la macaamilno garsoorayaasha?! Haddii aadan fahmin, waxaan sharxi doonaa sheegashadayda. Habkaagu wuxuu leeyahay waajibaad akhlaaqeed inuu u hoggaansamo filashooyinka waalidka sababtoo ah way i dhaleen oo i maalgaliyeen. Haddaba haddii ay i weydiiyaan inaan guursado xaas gaar ah oo aan ahayn mid aan la garanayn - sidaad u aragto waxay ahayd inaan addeeco iyaga, sax? Dabcan waa. Laakiin waxa la sameeyo, wuxuu leeyahay maya (iyo sidoo kale wuxuu xukumay Rama). Aaway akhlaaqdii halkan? Macnaha: Ma jiro waajibaad akhlaaqi ah in la adeeco waalidka marka la dooranayo lamaanaha. Xaq uma laha inay wax igu weyddiiyaan noloshayda. Haddaba maxaa dhib ah haddii la xasuusto iyo in kale? Farqiga u dhexeeya waa xalaal, laakiin waxaad ka hadashay waajib akhlaaqeed oo ah in loo hoggaansamo dalabaadka waalidka, mana jiro wax farqi ah oo u dhexeeya arrintan. Taas beddelkeeda, in la doorto gabadh halkii lab ah waa dhibaato weyn oo aan suurtagal ahayn wiilka, laakiin in mid ka mid ah lammaane ku beddelo mid kale waa arrin sahlan oo aan la soo koobi karin. Haddaba muxuusan uga baahnayn inuu tan sameeyo? Oo afkaagana: Yaa u oggolaaday nin inuu xidho waalidkiis oo uu qalbi xun ku geliyo meesha allabariga ee damacyadiisa, taas oo u horseedaysa isla naag uu doonayo. Kaas oo xamaasadiisa ku dhufan doona oo kaxaysan doona lammaane kale oo u keeni doona waalidkii qaaliga ah qanacsanaanta ugu badan. Guud ahaanna haddii uu ku raaxaysan waayo oo uu ku adag yahay- ha go’aansado oo ha rumaysto oo ha u tago Dr. Muuse oo uu ku garab galo sidii uu uga guulaysan lahaa. waa maxay dhibku?
Iyo dhamaadka hadalkaaga, qofka kansarku wuxuu heli doonaa waddo uu ku badbaado haddii uu naftiisa rumaysto. Iyo sidoo kale bukaan kasta oo kale oo dabadheeraad ah. Kuwani waa hal-ku-dhegyo shaki la’aan ah danayn la’aan iyo nacasnimo waaga cusub shaki ku jiro. Waxay dib iigu celiyaan sheekadii Rash Shevdron. Way fududahay in la sheego marka aad ka hadlayso kuwa kale oo aadan dan ka lahayn. Weydii shaqaale bulsho kasta wuuna kuu sheegi doonaa tan.
Aan ka bilowno dhamaadka:
Ma dhihin qofka kansarku waa hubaal inuu badbaadi doono. Waxaan ku idhi qof xanuun daran oo u muuqda mid aan dawo lahayn, wuxuu raadiyaa dawo. Boqor Xisqiyaah oo nebigii Ilaah ahaa ayaa ku yidhi, Waad dhimatay, soona noolaan maysid. Waxaad baadhisay oo baadhday, waxaad helaysaa xukunka jannada jacayl, fasax ayaa la siiyay dhakhtarka si uu u bogsado - maaha inaad quusto.
Waxaa jira nin Yuhuudi ah oo qaali ah, R. Cohen-Melamed, kaas oo ku dhacay xanuunka murqaha in ka badan 15 sano ka hor, mid ka mid ah dhakhaatiirta ayaa markaas ku wargaliyay in uu noolaado dhowr bilood oo keliya. waana nool yahay ilaa maanta buugaag buu qoray Intaa waxa uu ku guulaystey in uu ka qayb galo aaska dhakhtarkii u xaqiijiyey geeridiisa dhaw ):
Marka la eego u janjeera -
Uma iman in aan sameeyo doodo falsafadeed iyo cilmiyeed, haa suurtagal maaha? - Waxaan indhahayga hortooda ku arkay hal sawir oo keliya, nin dhallinyaro ah oo wareersan oo yaxyaxsan oo u kala jeexjeexay rabitaankiisa iyo iimaankiisa. Adduunka ma jiro waddo ay uga baxaan abuuraheeda iyo abuuraheeda labadaba. Qulqulluun kan ka’e adda addaa adda baasuu danda’a jedhameera.
Waxaan ka yara baqayaa 'talooyin maskaxeed', dhowr sababood awgood: aad bay yididiilo u qabaan, iyo nin la yimaada rajooyin heer sare ah iyo gaar ahaan rajo guul degdeg ah, wuxuu ku dhici karaa rajo-beel. Marka laga reebo, waxaa jira qaar ka mid ah daaweeyayaasha waa tabaruceyaal aan xirfad lahayn. Iyo 'habkooda soo noqnoqda', oo isku dayaya in ay 'xoojiso ragganimada' - waxay u fiican tahay kiisaska qaarkood, mana ii muuqato in tani ay tahay sababta dhammaan kiisaska.
Taasi waa sababta aan u leexday jihada Dr. Zvi Mozes, oo aanan garanayn shakhsi ahaan, laakiin qaabkiisa rajo-gelinta ah, laakiin aad u taxadar leh - waxay igu dhiirigelisaa niyad-jabka taxadar leh. Adiga, waxaan si kooban u soo xigtay isaga. Faallooyinkeyga ku saabsan labada maqaal ee Yoav Sorek, waxaan ku dhibtooday inaan koobiyo laba cutub oo muhiim ah hadaladiisa kuwaas oo caddaynaya suurtogalnimada iyo jaanisyadooda (sababtoo ah 'Link' Ma aqaano sida loo sameeyo, Dhanka kale I 'Linkopov' waa mid aan la daweyn karin :).
Waayo-aragnimada daaweeyaha ruug-caddaaga ah ee goobta, kuma socdo lugta… waana waajibkayaga inaan u sheegno kuwa aan go'aansanin jiritaankeeda, iyo suurtogalnimada inaan isku dayno inaan caawimaad ka helno.
Tafsiirkaaga Maharik ee ah in wiilku aanu waalidkii waxba ku lahayn gabi ahaanba ma cadda. Waxay ila tahay in dadka qaarkiis ay fahmeen in tani ay ku saabsan tahay sharafta aabbe loo diiday in wiilka uu naag guursado, haddii uu helo naag kosher ah oo uu jeclaado Man Mifis uu heli lahaa? Dr. Muuse wuxuu caawin karaa nin doonaya inuu ka dhigo Kono inuu doonayo inuu ka tago guurka xaaraanta ah, laakiin ka go'a guurka wanaagsan ee jannada iyo bini-aadmiga - Illahay ha u naxariisto.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, xataa haddii ninka dhallinyarada ah loo oggolaado oo la farayo in uu guursado talada qalbigiisa oo aan raalli ka ahayn waalidkii, waxaa ku waajib ah inuu kula hadlo wax wanaagsan oo nasteexo leh, si naxariis iyo ixtiraam leh. Waxaad ku tidhaahdaa: 'Waalidiinta qaaliga ah, wax kasta oo aad ii samayseen waan jeclahay oo waan jeclahay, waxaanan hubaa inaad cibaadaysi quduus ah ka heli doontaan gabadhan xaqa ah iyo naag geesi ah'. Iyo sida caadiga ah xitaa haddii aysan isla markiiba la heshiin - way heshiin doonaan marka uu awoow u dhasho.
Maxay ku farxi doonaan mamnuucida Cretan ee la abuuray ee loo yaqaan ' karaahiyo'?
Waxaan bogga ku qoray raaligelin aan ka bixinayo af-duubnaanta hadalkayga, sidoo kale halkan ayaan ku celinayaa (ma fahmin sababta loo maamulo laba kanaal, halkan kuma arko waxyaabo u baahan sir xad dhaaf ah, waxaan gartay in qaarkood dooda ayaa si khalad ah loogu weeciyay iimaylka halkan).
Run ahaantii, waxa i dhibay waxay u badnaayeen macnaha guud, laakiin waxa kale oo aan aad uga soo horjeeday nuxurka. Oo noocyada noocyadaaga ayaa lagu xadgudbi doonaa.
Dhanka Maxaarik iyo fikradda ixtiraamka dhulka dadka kale, ka fiirso hadaladeyda maqaallada halkan:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל Habka, way caddahay in qaabka hadalka ee waalidka uu yahay mid ixtiraam leh.
Wanaag iyo marlabaad waan ka xumahay
S.D. XNUMX ee Elul, b
Wadahadalladii aan dhawaan la yeeshay Rabbi Avraham oo na dhex maray email-ka gaarka ah, oo caawa la soo galiyay goobta - may ahayn mid uu Maykra rabay in lagu daabaco goobta, waana in loola dhaqmo sidii 'qabyo', taas oo aan qasab ahayn. ka tarjumaysa gunaanad wadajir ah.
Waan ka cudur daaranayaa isfaham waaga dhacay. Sida aan qoray, waxaan u maleeyay in si qalad ah ay arrimuhu u dhaceen email-ka caadiga ah halkii ay ku dhici lahaayeen goobta, manaan ku arag wax ka leexday khudbadihii halkan ka dhacay ee goobta, sidaas darteed ayaan u gudbiyay (in realtime). ) si loogu shubo goobta. Hadda uun bay yimaaddeen waayo hadda uun baa doodii dhammaatay. Runtii qoraaladii ugu dambeeyay ee na dhex maray markaan ogaaday inaan halkan loogu talagalin maan soo gelin. Si kastaba ha ahaatee, mar kale raali ahaada.
Waxaan ku socotaa xikmad Rabbi MDA, oo xigmad iyo cilmi buuxa leh, sida dhaqaaleyahan lagu kalsoonaan karo iyo deyr, Delbish Mada, si uu u barto Tawreed oo u baro, oo loo caleemo saaro qiyaas kasta, xaq iyo sharaf - nabadgelyadiisa ayaa loo soo celin doonaa Hada. oo Tawreed iyo shahaado ay bataan, si ay indhaha bulshada ugu iftiimiyaan! - Nabad iyo badbaado weyn,
Waxaan dalban doonaa wax badan oo tan ah, maadaama ay magaaladu ku saxan tahay dhibaatada ah in daawaynta cilmi-nafsiga ee xirfadlaha ah ay ku lug leedahay kharashaad dhaqaale oo culus, taas oo mararka qaarkood joojisa kuwa u baahan, kuna adkeynaysa inay u adkaystaan.
Kochav Hashahar iyo nawaaxigeeda, waxay xal u heleen iyaga oo dhidibada u taagay aasaaska loo yaqaan 'Chaim Shel Tova' (oo uu maamulo Rabbi Natan Shalev, rabbi ee Mevoot Jericho), kaas oo gacan ka geysta maalgelinta qoyska iyo lammaanaha daaweynta dhimirka ee kuwa u baahan.
Way mudan tahay in la qaato koorsadan ficilka ah ee xaafad kasta iyo xaafad kasta, iyo in la sameeyo lacag la mid ah kuwaas oo dhiirigelin doona oo ka caawin doona daryeelka caafimaadka dhimirka ee xirfadeed ee qofka iyo qoyska.
Ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu ka hadlay kumanyaal reer Yahuudah ah, isagoo gacantiisa cibaadada leh aawadeed.
Damchavi Kida, Salaan iyo Mahad, S.C. Levinger
Shalev iyo Yesha Rab waxay u dirayaan Mr. Chen Chen rabitaankiisa iyo faallooyinkiisa.
Oo isaga iyo anigaba waxaynu ku hayn doonaa duufaanka duufaanka, oo usha kabtanka ah ayaa loo sameeyay inay lulato. Haddii nin Roomaan ah uu kuu sheego seef iyo aaya, ogow in Yeruusaalem taallo ay ka dhisan tahay.
Waxaan ku guuleysan doonnaa Lior iftiinka iftiinka, oo waannu ka badbaadi doonnaa dhammaan amarrada naxariista leh. Nin wuxuu aad ugu qaylin doonaa walaalkiis, wiilal iyo gabdho leh oo wasiir halgamaa ah. Oo waxaan saxeexi doonaa codsi qof la jirdilay, kaas oo aanu u saxeexi doono wanaag sanadkan.
30 Tishrei 10 - 2016/12/35 saacada XNUMX:XNUMX
Dood ku saabsan mowduuca waxaa laga heli doonaa guga maqaallada:
Roni Schur, 'Waa suurtagal in la beddelo (daawaynta damacyada iska soo horjeeda ee' Talada Nafta'), Tzohar XNUMX (XNUMX), bogga 'Asif';
Rabbi Azriel Ariel, 'Qofna ma beddeli karaa? (Jawaab) ', halkaas, halkaas;
Dr. Baruch Kahana, 'Diinta, Bulshada iyo Dhaqancelinta Reverse', Tzohar XNUMX (XNUMX), oo ku taal bogga 'Asif'.
Dr. Zvi Mozes, 'Daawaynta Dib-u-noqoshada Dareenka nafsiyan wax ku ool ah', oo ku taal bogga 'Root'.
Soo koobid tafatiran oo ku saabsan noocyada daawaynta iyo ku xidhka iyo boosaska taban - Wikipedia, gelitaanka 'daaweynta beddelka'.
Waxaan hadda helay jawaabta bulshada cilmi nafsiga ee Israa'iil ee "ereyada rabbaaniyiinta":
Anagoo ah falanqeeyayaasha cilmi-nafsiga ee naftooda u huray inay si qoto dheer u fahmaan maskaxda bini'aadamka oo ka caawiya cidhiidhigooda xagga teraabiyada cilminafsiga, waxaan u aragnaa inay tahay waajibkayaga inaan ka dhiidhinno weedhaha aflagaadada ah ee ay dhawaan sameeyeen rabbaaniyiinta ee khuseeya bulshada LGBT. Sheegashada in khaniisnimadu ay tahay cillad maskaxeed, " leexleexad ", "naafo u baahan daweyn nafsi ah", waxay ka dhigan tahay xad-gudub halis ah oo ka dhan ah sharafta iyo xorriyadda aadanaha - waxayna ka soo horjeedaa booska casriga ah ee la aqbalay iyo aqoonta xirfadeed ee casriga ah ee ku saabsan jihada galmada iyo aqoonsiga. Bixinta 'baaritaannada maskaxda' ee rabbaaniyiinta iyo barayaasha aan loo tababarin tan asal ahaan waa khalad, runtiina waxaan u aragnaa muujinta fikradahaas khatar dhab ah oo ku wajahan nafta iyo xitaa nolosha dhalinyarada iyo qoysaskooda.
Yossi Triast (Gudoomiye) - isagoo ka wakiil ah Bulshada Cilmi-nafsiga ee Israa'iil
Oo waxaan la yaabanahay ninku ma doqon baa mise waa beenaale. Waxa uu qoraa waa wax aan macno lahayn dabcan. Waxaa laga yaabaa inuu hal mawqif ama mid kale ka haysto su'aasha ah in khaniisnimadu ay tahay qalloocan iyo in kale, laakiin wax yar ayay ku leedahay aqoonta xirfadeed ee uu leeyahay. Markaa wuxuu u muuqdaa inuu yahay doqon. Iyadoo laga yaabo inay tahay ka faa'iidaysi ula kac ah oo koofiyaddiisa xirfadeed si kor loogu qaado ajandaha qiimaha, isagu markaa waa beenaale. Waxaan uga tagayaa akhristaha inuu kala doorto xulashooyinka.
20 Tammuz 07 - 2020/14/43 saacada XNUMX:XNUMX
U malayn maayo in uu daruuri yahay doqon. Waxaa meeshaas ka jirta wacyigelin la’aan murugo leh, waxayna sidoo kale ka muuqataa dadka wax garadka ah. Haddii aad haysato wakhti kugu filan oo aad maskaxdaada wax iskaga dhaqdo, waxaad bilaabaysaa inaad u malaynayso inay run tahay oo aan la dhammayn karin. Nasiib darro tani waxay dhacdaa xoogaa.
20 Tammuz 07 - 2020/15/00 saacada XNUMX:XNUMX
Waxaan ugu jawaabay Pingback halkaas
Dib u celinta: Aqoonso khabiirka On qaanuunka iyo faahfaahinta